बैशाख २९, २०७६ GA
भोलि मिति बिक्रम संवत २०७६ साल बैशाख महिनाको ३० गते सोमबार तद अनुसार सन् २०१९ मे १३ तारिख तपाईको दिन कस्तो रहला ? हेर्नुहोस तपाईको भोलिको राशिफल !
स्वास्थ्यमा केहि सावधानी अपनाउनुपर्नेछ। शारीरिक थकानको अनुभूति हुनेछ। पेटसंगसम्बन्धी समस्या सताउन सक्ला ध्यान दिनुहोला। अपेक्षागरे अनुरुप हरेक कार्यमा सफलता मिल्नेछ। पारिवारिक मनमुटावको अवस्था सिर्जना हुनेछ। समग्रमा मेष राशी हुनेहरुका लागि भोलिको दिन मध्यम फलदायी रहेको छ।
आत्मविश्वासका साथ अघि बढ्नालेकार्य सफलता मिल्नेछ। पिता एवम पैतृक सम्पतिमा लाभ हुने योग रहेको छ। पिताको तर्फबाट लाभ मिल्नेछ। कलाकार तथा खेलाडीवर्गका लागि प्रतिभा प्रदर्शन गर्ने अवसर मिल्नेछ। सन्तान सुखको अनुभूति हुने छैन। समग्रमा भोलिको तपाइको दिन शुभ फलदायी हुने देखिन्छ।
परिवार तथा इष्टमित्रको प्रसस्त साथ र सहयोग मिल्नेछ। सकेसम्म भोलिको दिन आर्थिक योजनाका कार्यहरु नबनाउद नै राम्रो हुने छ। शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य अनुकुल रहेको छ। नया कार्यको थालनी गर्नका लागि भोलिको दिन उपयुक्त रहेको छ। शत्रु परास्त भएर जानेछ। भाग्योदयको सम्भावना रहेको छ।
कार्यमा सन्तुष्टि मिल्नेछैन। आँखा सम्बन्धि समस्याले सताउने छ। स्वास्थ्यमा बिशेष ध्यान दिनुहोला। परिवारमा अनावश्यक मनमुटावको स्थिति सिर्जना हुन सक्छ संयम रहनुहोला। बिद्यार्थीवर्गका लागि पठनपाठनमा खासै सफलता मिल्ने देखिदैन। संचित धन खर्च हुने सम्भावना रहेको छ। समग्रमा कर्कट राशी हुनेहरुका लागि भोलिको दिन मध्यम फलदायी रहेको छ।
आत्मविश्वासमा वृद्धि भएर जानेछ। अपेक्षा गरेअनुसार कार्यमा सफलता मिल्नेछ। सरकारी कार्यमा लाभ हुने देखिन्छ। सामाजिक क्षेत्रमा मान सम्मानमा वृद्धि भएर जानेछ। पेट सम्बन्धी समस्या देखिन सक्ने भएकाले खानपानमा बिशेष सावधानी अपनाउनु पर्ने देखिन्छ। समग्रमा भोलिको दिन सिंह राशी हुनेहरुका लागी फलदायी रहेको छ।
अनावश्यक मुद्धा मामलामा फस्ने सम्भावना रहेको छ। खर्चको मात्रामा वृद्धि भएर जानेछ। धार्मिक कार्यमा मन जानेछ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा खासै प्रगति हुने देखिदैन। स्वास्थ्य खासै राम्रो रहेको छैन। आध्यात्मिक कार्यमा मन लगाउनाले ध्यान हरेक कार्यमा सफलता मिल्ने देखिन छ।
इष्टमित्रका साथमा दिन सुखद बित्नेछ। परिवारमा सुख शान्तिको वातावरण रहने छ। स्वादिष्ट भोजनको अनुभूति मिल्नेछ। पुत्र तथा पत्नीको तर्फबाट लाभ हुने देखिन्छ। व्यापार विस्तार भएर जानेछ। आयआर्जनका नया स्रोत खुल्नेछ। दाम्पत्यजीवनमा खुसियाली छाउने छ। समग्रमा तपाईका लागि भोलिको दिन शुभ फलदायी रहेको छ।
घरायसी वातावारणमा खुसियाली छाउनेछ।कार्य सरलता पुर्वक सम्पादन भएर जानेछ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा लाभ हुने समय रहेको छ। कृषि तथा पशु चौपायको क्षेत्रमा लाभ हुनेछ। नोकरीमा पदोन्नतिको अवसर मिल्नेछ। स्वास्थ्य अनुकुल रहेको छ। सन्तान सुख मिल्नेछ। मान सम्मानमा वृद्धि भएर जानेछ।
स्वास्थ्यमा समस्या देखिन सक्ने भएकाले खानपानमा बिशेस सावधानी अपनाउनुपर्ने देखिन्छ। मानसिक उत्साहमा वृद्धि भएर जानेछ। सन्तान सुख मिल्ने छैन। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा सोचे अनुरुपको सफलता खासै मिल्ने छैन। कार्यमा सोचेअनुरुपको सफलता मिल्ने छैन।
मनमा नकारात्मक विचार भाव पैदा भएर जानेछ। अपेक्षा गरे अनुसार सहकर्मीले साथ दिने छैनन। अचानक धन खर्च भएर जाने सम्भावना रहेको छ। खानपानमा बिशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। स्वास्थ्य सामान्य रहेको छ। आकस्मिक धन लाभ हुने सम्भावना समेत रहेको छ।
आत्मविश्वासमा वृद्धि हुने भएकाले कार्यमा सफलता मिल्ने छ। बोलीको प्रभाव बढेर जानेछ। छोटो दुरीको यात्रा हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। दाम्पत्य जीवनमा खुसियाली छाउने छ। मान प्रतिष्ठामा वृद्धि भएर जानेछ। स्वादिष्ट भोजनको अनुभूति हुनेछ।
अपेक्षा गरे अनुरुप कार्यमा सफलता मिल्नेछ। परिवारमा सुख ,शान्ति र आनन्दको वातावरण सिर्जना भएर जानेछ। प्रतिष्पर्धीको बिचमा पनि विजय प्राप्त गर्ने समय रहेको छ। बिरामी व्यक्तिको स्वास्थ्यमा सुधार भएर जानेछ। शारीरिक तथा मानसिक अस्वस्थताको अनुभूति हुनेछ।
प्रकाशित : आइतबार, बैशाख २९, २०७६१४:१५